Yini PC kangcono nevidiyo for £ 1,000? - Izindaba Rule
indodakazi Johnny sika oneminyaka engu-13 ubudala udinga PC entsha ngoba Adobe Premiere Pro kubiza mayelana £ 1,000. Yini okukhethwa kukhona?
Lesi sihloko osesikhundleni “Yini PC kangcono nevidiyo for £ 1,000?” lalotshwa Jack Schofield, I-theguardian.com ngoLwesine 29 Agasti 2019 07.00 UTC
Indodakazi yami eneminyaka engu-13 ubudala ubonisa isithakazelo esiqotho, futhi ithalenta, ukuhlela ividiyo. Sathola wakhe okubhaliselwe umfundi Adobe Creative Cloud ngakho wayengase ufunde futhi usebenzise Ngemva Effects Premiere Pro. laptop yethu eneminyaka emithathu ubudala imayelana nje sokubhekana nezinselele zokuba isofthiwe, kodwa njengoba eba ekuqondeni, Ngiyazi umzukuzuku noma siyeke phansi ngokuphelele.
Wawuyoba yini isixazululo esingcono kakhulu - noma i-laptop noma ideskithophu - ezokwenza futhi ihlale iminyaka ezinhle ezimbalwa? Isabelomali wethu emhlabeni £ 1,000. Ngisacabanga ekwakheni PC ukuze ivumelane, kodwa hhayi ukuthi leli kungaba isinyathelo ikude kakhulu. Johnny
Kukhona isithakazelo esikhulayo ukuhlela ividiyo, mhlawumbe ngoba isiqophi buya ikuyo yonke indawo, futhi ezishibhile. Awusadingi ukuthenga ikhamera yevidiyo, wokudlala, isikrini futhi usimende splicer, okuyinto indlela thina ukuhlelwa ekhaya amabhayisikobho ezinsukwini ubudala.
amakhamera Iningi digital kanye Smartphones ungakwazi manje ukudubula ividiyo, futhi GoPro-isitayela "isenzo amakhamera" futhi drones kuthiwa odala amathani izinto. amakhompyutha Iningi ezishibhile Ungahlela futhi ukubonisa amavidiyo, ngoba manje video emagama yakhiwe singene processor. Vele ufune Intel Quick Ukuvumelanisa.
Kulula ukwenza nevidiyo elula, ezifana "uphole futhi tailing" ividiyo ye-YouTube kanye ungeza izihloko, kodwa sina post-processing emsebenzini ungasebenzisa wonke amandla ungakwazi ukukhokhela, ngenxa nje isikhathi kuthathwe. Uma PC yakho kuthatha amahora ambalwa ukuze nginikeze ividiyo, ubhekene ngeke ukuzama okuningi ongakhetha. Uma kuthatha imizuzu embalwa, uzokwenza kanjalo. Empeleni, ezinye izinzuzo ukwakha "unikele amapulazi"Ukwenza imisebenzi ukuthi kungathatha isikhathi eside kakhulu ku-PC, ezifana umsebenzi 3D Nangemva Kokufunda IZwi LikaNkulunkulu Effects. sikhatsi sabo imali.
Ukukhetha processor kwesokudla kubalulekile. Photograph: Intel Corporation
Thenga processor esheshayo ungakwazi ukukhokhela, futhi ngokuvamile, cores kulapho ngcono. Abantu abaningi akudingeki processor okusheshayo esikhathini esiningi, kodwa lapho ngikhuluma kucutshungulwa amavidiyo, zonke cores eziyisithupha yami Core i5-8400 run at eduze 100% isikhathi eside. Ngangibona nakanjani zisebenzisa ngaphezulu.
Akunjalo kudala, "Dual core" chips kwakuyinto, bese sifika cores ezingase ukusebenzisa izindikimba ezimbili ngesikhathi esisodwa. Namuhla, Intel Core i9-9900K futhi Ryzen AMD sika 7 2700X babe cores eziyisishiyagalombili kanye 16 izindikimba, kuyilapho Ryzen Threadripper 2 2990WX has 32 cores futhi 64 izindikimba. Ngenhloso iningi, kufaka phakathi uhlu ukuhlela ividiyo nokudlala, kungcono ngokuvamile kangcono ukuba cores ngokushesha (GHz ngaphezulu) kunokuba cores kancane ngaphezulu. Ukuze abathengi, eziyisishiyagalombili iyinombolo ezinhle kakhulu.
I ayisishiyagalombili-core Intel Core i7-9700 kuwukukhetha lokuqala kulelizinga. Omdala Core i7-8700K kanye zakudala Core i7-7700 namanje enze kahle uma ungathola kuzo at isaphulelo. Kusukela AMD Zen ububanzi, the Ryzen 7 2700 futhi 2700X (kokubili 8C / 16T) Ubonakala inani elihle, kuyilapho Ryzen 5 2600 futhi 2600X (kokubili 6c / 12T) tinike sendikimba ngentengo ongaphakeme.
Notebookcheck sika ukuqhathanisa mobile zonke izilimi inikeza isiqondiso ezimagebhugebhu ukuze ukusebenza isihlobo engaphezu kuka 1,400 zonke izilimi. Okuthile phezulu 25 Kungaba kuhle, uma ungakwazi yini ukusikhokhela. Okuthile phezulu 60 kufanele kube OK, nikhumbula ukuthi ezishibhile yami (£ 170) Core i5-8400 namanje esikhundleni 37, kuze Intel 10-isizukulwane Comet Lake chips push phansi kancane. (A Threadripper 32-core imayelana £ 1,500 futhi ngokuphelele awubalulekile umehluko.)
Ngingumfana zonke esivuna AMD Ryzens, kodwa Puget Systems 'ebhentshini ukuhlolwa abonisa ukuthi QuickSync Intel ulunika onqenqemeni ngoba Premiere Pro abasebenzisi.
Kukhona isizathu amageyimu PC ngokuvamile amadeskithophu, kodwa akudingeki ukuba abe ezinhle nge izibani Siyafulesha. Photograph: Wolfgang Rattay / Reuters
Uma unaso isikhathi umbhoshongo bekhompuyutha, ke iyona lesikahle for ukuhlela ividiyo. Towers babe isikhala kanye nokupholisa ukusebenzisa hot, chips okusheshayo. Ngokuphambene, laptops zisebenzisa ekhethekile ongaphakeme-amandla chips yakhelwe sikhiphe ukushisa kancane. Lezi ukuqala kancane futhi kungenzeka zisalokhu zingenazo throttled ngoba okweqile. Ngokwesibonelo, the i5-2500 Core processor Ngathenga e 2011 namanje kancane ngokushesha ngaphandle Core i7-8550U noma Ryzen 5 2500U kusukela 2017, futhi cishe izando kule nyanga 10-isizukulwane Intel Core i7-10510Y. I U kuyinkomba ewusizo. i5-2500 wami wagijima ngesikhathi TDP ka 95W, kuyilapho U-uhlobo lanamuhla chips zenzelwe qalisa esiqalisweni 15W e laptops. I-Core i7-10510Y siphela ngesikhathi 7W miserly.
enye inzuzo enkulu desktop umbhoshongo iwukuba kulula uthuthukise ngokungeza imemori, isitoreji futhi kangcono ihluzo amakhadi. Kunzima ukushintsha processor, futhi entsha Intel CPUs ngokuvamile badinga ukwesekwa chips entsha, okusho ukuthi umbadlana entsha. (AMD kungaba enomusa kancane.)
Ukuhlela ividiyo sizuzisa ekutheni eziningi inkumbulo (RAM) futhi okungenani amabili amadivayisi isitoreji okusheshayo.
Ukuze abahleli professional, 32GB akuyona bulo, kodwa ubuncane onomqondo. Wabasaqalayo, 8GB Ingubuncane, inqobo nje uma ungakwazi ukwandisa yona 16GB noma 32GB kamuva.
Ukuze isitoreji, udinga kokubili isivinini kanye isikhala. SSDs kuyashesha, kodwa labo elikhulu eqolo, ngakho-ke kunengqondo ukuba oshayelayo emibili. amafayela womthombo Project kufanele kube phezu 256GB esheshayo noma SSD emikhulu, mhlawumbe M.2. Ungabhala amafayela kudivayisi kancane, ezifana 1TB noma ngaphezulu hard drive.
Ihluzo amakhadi ziyahlukahluka kusuka kuyize esisemqoka, kuncike isofthiwe oyisebenzisayo, futhi wenzani nalo. Ngokomlando, the Quadro engcono amakhadi wokugijima Premiere Pro bebelokhu ezibizayo. Ngokujabulisayo, manje abantu abaningi angasebenzisa amakhadi GeForce eyenzelwe emakethe amageyimu, lapho yokuthengisa amavolumu ziphakeme futhi umncintiswano ushayela phansi amanani. Empeleni, lokhu kusebenza PC lonke, lapho manje abanye yokumba amageyimu ongancintisana workstations.
Quadro workstation ihluzo amakhadi Nvidia sika kukhona workhorses enamandla video processing, kodwa makhulu eqolo ngaphezu kwanoma umthengi okulingana yabo GeForce onobuhle. Photograph: Nvidia
Kukhona imithombo emithathu esobala. Okokuqala, engathenga PC ideskithophu kusuka omunye brand ezinkulu ezifana Dell, HP noma Lenovo, esitolo noma inthanethi. Okwesibili, ungase yakha awakho, kodwa kuzodingeka ukutshala isikhathi esiningi ekukhetheni izingxenye, you landela Yakha yomunye kusukela PC Partpicker. Okwesithathu, ungase uthenge encane kodwa ezimisiwe British PC nomkhiqizi ezifana PC Specialist noma Chillblast. Bakha PC oda kusuka ezahlukene izingxenye, namanani ziyafinyeleleka. Uthola unenkululeko we Yakha DIY ngaphandle ingozi noma okubi kakhulu.
Inketho wesine iwukuba ngiqhathanise amanani ezinto okwesikhathi workstation basilungisa leso ihlaliswe phansi ngumuntu corporation enkulu. Bheka izinhlelo nge Intel Xeon noma Core I7 izilimi futhi Nvidia Quadro ihluzo amakhadi namanje Kunconywa-Adobe Premiere. Lezi ungaya ngamanani aphansi ngoba abazi isikhalazo ukuze abadlali futhi ukhona Overkill abathengi kakhulu. Ungakuthola ezindaweni ezifana Tier1Online futhi ku-eBay, kodwa izinto amanani ziyahlukahluka. HP sika Z ibanga Dell Precision workstations kuphela zingezinye zezibhedlela ezihamba. Vele qiniseka ungatholi umuntu nge processor kancane.
Tier1Online okwamanje has a Dell Precision T7600 amabili okusheshayo ayisishiyagalombili-core Xeon izilimi, 192GB memory, ezintathu SSDs kanye Quadro K4000. Kungaphambili izidingo indodakazi yakho neminyaka ibhajethi yakho ngesikhathi £ 1.399, kodwa labo Xeons esetshenziswa abiza $2,000 ngamunye.
Omen Obelisk amageyimu PC HP sika iza ezihlukahlukene ukucupha. Photograph: HP
Inkinga yokuqala nge mass-emakethe amadeskithophu wukuthi umkhumbi kakhulu 8GB noma imemori kancane. Lokhu kungase kube ngokwanele indodakazi yakho, kodwa ubuze Esibalulekile ukuqinisekisa ukuthi ungakwazi wengeze okungenani elinye 8GB. Ngokwesibonelo, HP sika Omen Obelisk (875-0005na) kuyinto enhle, ezishibhile imidlalo PC nge i5-8400 Core, 8GB, GeForce GTX 1060 ihluzo ikhadi, 128GB M.2 SSD futhi 1TB hard drive for £ 839 (nge £ 60 off). Ungase ufake elinye module 8GB i slot elingenalutho ukuze uthole £ 35,99.
Okuxakayo, Currys PC World has Omens nge 16GB, nayo yonke ingxenye sebhithi kungcono. Ngokwesibonelo, Omen yayo 875-0051na has a entsha ye, ngokushesha i7-9700F, 16GB memory, esiphakeme. GeForce RTX 2060 nge 6GB ayo memory, 256GB SSD futhi 2TB hard drive for £ 1.299. Lokhu kungaba Pick yami ukube bekungengenxa intengo isabelomali-busting.
Ungakwazi Squeak ngaphansi kwesabelomali ukuyekethisa phezu processor. Currys, ngokwesibonelo, has a 16GB PC Specialist Vortex nge Core i5-9400F, GeForce GTX 1660Ti, 240GB SSD futhi 2TB HDD for £ 999. Lena sebhithi ethandwa, uma ufuna ngiqhathanise amanani ezinto. Ngokwesibonelo, Argos has a efanayo Acer Nitro N50-600 kwi £ 899,99.
Kufana kakhulu indzaba lefanako Chillblast, lapho yayo pre-wakha isithombe- futhi PC isiqophi-ukuhlela has cishe Spec kwesokudla (Core i7-9700K futhi 16GB kodwa akukho RTX 2060, esesikhundleni ngaphezulu CUDA cores,) ngesikhathi "okungalungile" intengo, £ 1,299.99. Ngithathe ezincoma lokhu komunye umfundi isiqophi-bahlela, Janet, isabelomali kabani isesikhathini £ 2,500, kodwa kabani izidingo nesizotha kakhulu (egijima Movavi yevidiyo).
Ngingathanda ukukhuthaza umuntu ekhulele £ 1,000 kanye isithakazelo sína ukuhlela isiqophi ukulondoloza i-kancane isikhathi eside. Ukuze uthole saqala oneminyaka engu-13 ubudala, Ngingathanda ukuthola okungenani i5-8400 Core, 8GB nekhadi ihluzo ukuthi kuvuliwe uhlu Adobe, ke uthuthukise izingxenye njengoba futhi lapho kudingeka. Kuyoba ngcono omkhulu ukuthi waba usebenzisa namuhla.
← Samsung Galaxy S10 5G ukubuyekeza Ngingumfana oncologist owangena umdlavuza webele. Lena engakufunda →